IApartment yeComfy Studio enokukhanya okuninzi, uphahla
I-studio ye-Sunlit, i-rooftop access: Kwi-173rd kunye ne-Broadway, kufuphi ne-Key Foods supermarket (<1 min. hamba), i-mall kwi-bridge plaza, i-express trains (A, kunye ne-C, kunye ne-1) iya kukufumana phakathi kwedolophu kwimizuzu engama-25. , kunye namaqashiso eCaribbean, Latin-American, Asian-fusion ukutya kunye nemivalo. Indlu izolile kwaye ijonge ngasemva, inombindi weA / C kunye nekude, iheater, iTV eneNetflix, iDisney +, iHulu, iVidiyo eyiNkulumbuso, iKhaya likaGoogle kunye netafile enkulu yokutya enokukhanya okuninzi kwendalo. Ikhitshi enefriji encinci. (ZONKE ZABUCA)
Kukho ukufikelela kuphahla lwabucala (ekwabelwana ngaso sisakhiwo kuphela), kanye phezu kweflethi, kunye netoni yokukhanya kwelanga kwendalo. Ikhitshi ayinayo i-microwave, kodwa kukho i-oveni encinci, ifriji encinci, kunye nomenzi wekofu. Qaphela ukuba esi sisitudiyo sabucala ngokupheleleyo kwaye akukho nto kwabelwana ngayo nabanye abantu. I-COVID-19 kunye nomsebenzi-usuka ekhaya unobuhlobo.
YiWashington Heights-Yintoni ongayithandiyo? Ukutya kweSpanish, umculo, imivalo, kunye nendawo ephilayo egcwele iivenkile kunye neesalon. I-Midtown luhambo lukaloliwe lwemizuzu engama-25, kwaye uDyckman ukwindawo enye yokumisa kunye nezitrato ezinemithi egcwele imivalo kunye neendawo zokutyela. IHarlem ikwindawo ezi-3 zokumisa kude.
Akukho nxibelelwano lweendwendwe, kukho ibhokisi yokutshixa isitshixo.